Madaxweynaha Turkiga iyo Madaxweynaha Ruushka oo maanta wada hadal yeelanaya | Baydhabo Online
Madaxweynaha Turkiga iyo Madaxweynaha Ruushka oo maanta wada hadal yeelanaya
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta ku soo dhaweeynaya magaalada Saint Petersburg, dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Labada Madaxweyne ayaa isku dayaya in ay dib u hagaajiyaan xiriirka labada dal ee muddooyinkii danbe xumaa, isla markaana ay galaan heshiis cusub oo wada shaqeyn.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Erdogan ayaa booqashadiisa magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka noqoneysaa middii u horeysey ee rasmi ah oo uu dibada ugu baxo tan iyo markii uu fashilmey Inqilaabkii Milterigu qaadeen 15 Luuliyo 2016.
Madaxweynaha Ruushka Putin ayaan la hadlin Erdogan muddo 6 bilood. Xiriirka labada dal ayaa aad u xumaadey kadib markii Turkigu soo rideen diyaarad kuwa dagaalka ah ee Ruushku lahaa taas oo ay ku eedeeyeen in ay ku soo xadgudubtey hawadooda, waxaana diyaaraddu ku dhacdey gudaha Siiriya xadka Turkiga iyo Siiriya bishii Nofeember 2016.
Shirka maanta ka dhacaya Saint Petersburg ayaa labada Madaxweyne doonayaan in ay khilaafkoodi dhinac iska dhigaan isla markaana wada shaqeyn cusub kala saxiixdaan.
Ajandaha maanta oo Salaasa ah shirkan looga hadlaayo ayaa u badan xiriirka ganacsi ee labada dal.
Turkiga ayaa doonaya in Ruushku joojiyo xanibaadii ay saareen khudaarta iyo miraha ay u soo dhoofin jireen Turkiga. Lixdii bilood ee u danbeysey ganacsiga labada dal ayaa hoos u dhacay 60%, waxaana la aaminsan yahay in khasaaradda ugu badan ay soo gartey Turkiga.